शव व्यवस्थापनको सामग्री अस्पताल आफैँले किन्ने - Nepal Sanchar
शव व्यवस्थापनको सामग्री अस्पताल आफैँले किन्ने
४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार ०८:२४
कर्णाली, जेठ ४ गते । कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापनमा चाहिने सामग्री आफैँले किन्ने भएको छ । यसअघि नेपाली सेनाले आफ्नो नियमानुसार शव व्यवस्थापन गर्दा मृतकका आफन्तलाई नै ती सामग्री किन्न लगाउँथ्यो ।
प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने गिरिजा देखि केपि सम्मा! कसले ,किन गरे भंग?
नेपालको यी ३० अस्पताल, जहाँ कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार हुन्छ
नेपालमा थप ८ हजार १ सय ७३ जना कोरोना संक्रमित थपिए, २४६ जनाको मृत्यु
नेपालमा थप ८ हजार २ सय ३ जना संक्रमित थपिए, १९६ जनाको मृत्यु
यस्तो छ शेयर कारोबारमा दिनहुँ कीर्तिमान बन्नुको कारण
नेपाल प्रहरीले संकलन गर्‍यो देशभरबाट ९ हजार अक्सिजन सिलिन्डर